अन्य कार्यक्रमहरु – Youth, Politics & Nepal
विभिन्न मुद्दाहरुलाई लिएर उत्पन्न भएको द्धन्द्धलाई आपसी छलफल तथा सहकार्य मार्फत निकास दिने प्रयत्न गरियो ।
सहकार्य युवा राजनीतिज्ञ बिच मात्र नभएर युवा उद्यमी र युवा राजनीतज्ञ बिच पनि हुनुपर्छ भन्ने सन्देशका साथ २०७० असोज ३, ४ र ५ गते सोल्टी होटेलमासाउथ एसियन अन्ट्रप्रनर समिट (South Asian Entrepreneur Summit) कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।
विभिन्न मुद्दाहरुमा संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरियो ।
विभिन्न आठ राजनीतिक युवा संगठनका प्रतिनिधिहरु तथा अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहाकार डा. चिरञ्जीवी नेपालको उपस्थितिमा मिति २०७० श्रावण २८ गते होटेल हिमालयमा सहकार्य तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम अन्र्तगत अन्र्तक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो । कार्यक्रममा युवा संघ, नेपालका निरु पाल तथा तराई मधेश युवा फ्रन्टका मुकेश कुमार झाले बाढी पिडित क्षेत्रमा अवलोकन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । आठ राजनीतिक युवा संगठनहरुले बाढी पिडित क्षेत्रमा गएर अवलोकन गरी त्यहाको बस्तु स्थिति बुझि तयार पारिएको प्रतिबेदन मार्फत सम्बन्धित संघ–संस्थाहरुलाई सहयोगको लागि अपिल गरेका थिए ।
उक्त प्रतिवेदनको प्रस्तुति पश्चात डा. नेपालले नेपालको बजेट तथा आर्थिक मुद्दाहरुको बारेमा आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो । कार्यक्रममा आठ राजनीतिक युवा संगठनका प्रतिनिधिहरुले डा. नेपाल समक्ष आफ्ना जिज्ञासाहरु राख्नु भएको थियो ।